Home » Features » Zimbabwe Politics » Robert Mugabe
Robert Mugabe is the current and second President of Zimbabwe.
He served as the head of the state since 1980 and as the Prime Minister of Zimbabwe from 1980-87.
Robert Mugabe in News
Zimbabwe President Mugabe wants 100 percent local control of economy
Zimbabwe President Robert Mugabe on Friday said the country wants 100 percent control over the economy by local people while foreigners come in as partners.
UN blasted for appointing 'blood on hands' Zimbabwean prez Mugabe 'leader of tourism'
The United Nations' appointment of Zimbabwean President Robert Mugabe as the leader for tourism, despite being subject to a travel ban, has been strongly criticized by his political opponents.
Scotland Yard to grill Mugabe's former henchman to nail despot over mass murder charges
British detectives will interview Robert Mugabe's former henchman Phillip Machemedze in Bristol next week, in a bid to get evidence for putting the Zimbabwe President on trial for his war crimes.
'Zimbawe must prevent recurrence of violence during poll': UN rights chief Pillay
UN human rights chief Navi Pillay has said that Zimbabwe must take measures to prevent a recurrence of the deadly violence that engulfed the country's last presidential election four years ago.
Only three out of 200 suspected war criminals living in Britain for past 18 months have been sent out of the country.
Britain's arms industry and other companies are to be investigated by the country's lawmakers for allegedly using taxpayer funds to help Zimbabwean dictator Robert Mugabe buy five Hawk fighter jets and 1030 police Land Rovers which he used to suppress dissent.
'Fit' Mugabe back to Zimbabwe from Singapore
Zimbabwean President Robert Mugabe, who was believed to be fighting for his life in a Singapore hospital, has returned to his home country.
Zimbabwean Defence Minister, Emmerson Mnangagwa, who is nick named 'The Crocodile' for his ruthless reputation, is expected to take power in the country, even as officials denied reports that President Robert Mugabe was fighting for death in Singapore hospital.
Zimbabwe dismisses 'malicious' Mugabe deathbed reports
The Zimbabwe government has dismissed reports suggesting that President Robert Mugabe is fighting for his life in a Singapore hospital with an undisclosed illness, calling them 'malicious' hogwash.
Zimbabwean President Robert Mugabe is reportedly fighting for his life in a Singapore hospital with an undisclosed illness.
Zimbabwean President Robert Mugabe has reportedly signed a secret 'gentleman's agreement' to hand over power to his Defence Minister, Emmerson Mnangagwa, according to sources close to the two men.
Zimbabwean President Robert Mugabe, who turned 88 today, has said that he has died and come back to life more times than Jesus Christ.
Zimbabwean President Robert Mugabe is all set to have a near million-dollar birthday bash when he turns 88 next week, at a time when most people in his country are scavenging for food and millions are unemployed following years of economic and political strife.
Zimbabwe's media commission has said that it will ask authorities to ban foreign newspapers that are not registered to operate in the country.
Zimbabwean President Robert Mugabe is planning to retire after his country's next elections and is seeking immunity from prosecution for a string of human rights abuses, it has emerged.
Workers in Zimbabwe accuse Chinese firm of physical punishments, meagre pay
A Chinese contractor and his managers have been accused of meting out physical punishments, miserable conditions and meagre pay to workers involved in building of Zimbabwe's national defence college.
Footie fan Mugabe says he's a Chelsea supporter
Zimbabwean President Robert Mugabe has said he is a big football fan and supports the football club Chelsea.
Zimbabwean MP released on bail after accusing Mugabe of having gay sex
A Zimbabwean parliamentarian was held in custody for seven days after accusing President Robert Mugabe of having gay sex with another politician.
'Blood diamonds' could pay for Mugabe's election terror campaign against opponents
'Blood diamonds' are would be used to fund a new campaign of violence by Zimbabwean President Robert Mugabe's regime against his political opponents, it has emerged.
'Defiant' Mugabe says will be "act of cowardice" for him to step down
Zimbabwe's 87-year-old President Robert Mugabe has said that he would not retire ahead of proposed elections next year and would stay on to lead the country against a 'Western campaign for regime change'.
Zimbabwe's Mugabe calls for elections in 2012 to replace power-sharing government
Zimbabwean President Robert Mugabe has said elections to end a power-sharing government should be held in 2012.
Zimbabwe PM Tsvangirai blames Mugabe's agents for his divorce after 12-day marriage
Zimbabwe's Prime Minister Morgan Tsvangirai has divorced his wife, Locadia Tembo, just 12 days after his marriage, and held his rival, Robert Mugabe and agents responsible for the 'plot'.
Mugabe 'secretly receiving prostate cancer treatment in Singapore'
Zimbabwe President Robert Mugabe, who is believed to be suffering from prostate cancer, is secretly receiving medical care at a private hospital in Singapore.
Whistle blowing website Wikileaks has revealed that Zimbabwe President Robert Mugabe's top advisers regularly had talks with US diplomats, and shared insights into the rivalries within the top ministers of his coalition-government cabinet.
Mugabe has terminal cancer, could die within 2 years: Wikileaks
Zimbabwe President Robert Mugabe has terminal cancer and is not likely to live beyond 2013, leaked US diplomatic cables have claimed.
Gaddafi still in Libya: Spokesman Moussa Ibrahim
Colonel Muammar Gaddafi's spokesman Moussa Ibrahim has claimed that the toppled Libyan leader is still in Libya.